Fandoavan-jiro ao Toamasina Mampijaly ny filaharambe
Manoloana ny fijaliana ateraky ny filaharana lava reny eo Ampanefana ny fakitiora ny jiro sy rano lanin’ny mpanjifa ny orinasa Jirama ao Toamasina dia nametraka lamina ho fisorohana izany ny Tale-paritra, Toto Jean de Dieu, sy ny ekipany.
Nisy ny fiaraha-miasa tamin’ireo zotram-pifandraisana samihafa ahafahana mandoa ny saran’ny jiro sy rano lany amin’ny alalan’ny finday. Tsotra ny fampiasana azy io, hoy ity tale ity, no haingana ary miaro amin’ny fiarovana ny vola izay entin’ny mpanjifa no mampihena ihany koa ny fotoana very. Hatreto anefa dia mbola vitsy ireo mpanjifa no mampiasa izany ka mbola mahatonga ny filaharana lavareny rehefa tonga ny fotoana hanefana ny fakitiora. Nitondra fanazavana mikasika izany ity tale ity ary nilaza fa azo atao tsara ny mandoa ny faktiora amin’ny alalan’ny atao hoe “mobile money” ary tsy misy sarany ny fandoavana azy. Mila mivoatra isika, hoy ity tale ity, fa tsy hihemotra mitovy tany amin’ny taona 1980 ary io no miaro amin’ny tsy fandriampahalemana. Mikasika ny famatsiana herinaratra ao an-toerana kosa dia nambarany fa foana hatreo ny fahatapahan-jiro satria vita ny taribia lehibe nisy nangalatra. Io taribia io dia mitondra ny herinaratra avy any Volobe ho any Toamasina. Tsy manana olana amin’ny famokarana jiro ny Jirama Toamasina, hoy izy, fa mbola manana ambony 8MW mahery aza. Mikasika ny fanisan-jiro na kaontera indray dia efa manao ny fizarana izany ny ao amin’ny Jirama Toamasina fa ny volana Martsa sy Aprily ihany no somary tara kely, hoy hatrany ny fanazavana.